कोरोना महामारीपछि मलेसियामा संकटकाल – NepalajaMedia
कोरोना महामारीपछि मलेसियामा संकटकाल
January 13, 2021 132
विश्वमै महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भनेर मलेसियामा संकटकाल लगाइएको छ ।
त्यहाँका राजा अल सुल्तान अब्दुल्लाले देशमा संकटकाल घोषणा गरेका हुन् । यो संकटकाल कम्तीमा पनि ६ महिना रहने जनाइएको छ । कोरोना नियन्त्रण भएको खण्डमा भने अवस्था हेरेर त्यसअघि नै संकटकाल खुकुलो बनाउने सम्भावना पनि रहेको समाचार संस्था अलजजिराले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री मुहयिदिन यासिनको सिफारिसमा राजा अब्दुल्लाले संकटकाल लगाएर मलेसियाको संसद निलम्बन गरेका छन् । मलेसियाको कानुन अनुसार संकटकाल लागू भएपछि संसद स्वतः निलम्बन हुन्छ । मलेसियामा संकटकाल लागू भएमा सरकार सञ्चालनको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा जाने व्यवस्था छ ।
यासिनले गएको अक्टोबरमा संकटकाल लगाउन सिफारिस गरे पनि त्यसबेला राजाले अस्वीकार गरेका थिए । विपक्षीहरुले शासन सञ्चालनमा आफूले गरेको कमजोरी लुकाउन प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको बहाना बनाएर संकटकाल लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको खबरहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
मलेसियामा अहिलेसम्म एक लाख ४१ हजार पाँच सय ३३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा पाँच सय ५९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । मलेसियामा यस अघि सन् १९६९ मा साम्प्रादायिक हिंसा भड्किएपछि संकटकाल लगाइएको थियो ।
Prevप्रहरीको फरार सूचीमा रहेका कालिबहादुर सुटुक्क छिरे बालुवाटार, पुर्व मावोबादीलाई ओली गुटमा तान्न राखे यस्ता ४ माग !
Nextयो यस्तो स्थान जहाँ संसारभरबाट मर्नको लागि पुग्छन् मानिस!
स्त”न ठुलो बनाउन शल्यक्रिया गराएका दुई महिला पक्राउ
कोरोना संक्रमित पूर्वराजा रानीको स्वास्थ्य विग्रिए पछि अस्पताल भर्ना